Ny filoha Rajoelina mivady, omaly teny amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Nizara tamin’ny fomba ofisialy ny Rakibolana ho an’ny mpianatry ny EPP, CEG ary ny lisea, eo amin’ny faritra Analamanga. Tafiditra ao anatin’ny “Velirano faha-4” izany. Natao izany hoentina hanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana eto amintsika. Hanampy ireo mpianatra amin’ny fikarohana sy hifehezana ny teny Malagasy. Hizara boky fianarana amin’ny taranja maro ihany koa ny filoha, toy ny taranja Malgasy, Matematika ary Frantsay amin’ny taom-pianarana vaovao.
Nisy fidinana ifotony natao’ny minisitriy ny Fahasalam-bahoaka, Pr Ahmad Ahmad sy ny minisitry ny Fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro Randriamandranto Joêl, teny amin’ny foiben’ny “Connecteo Andranomena”. Tonga nijery ireo fandraisana an-tanana ireo olona manontany vaovao momba ny valanaretina Covid-19 na Coronavirus, manerana an’i Madagasikara.
Mbola maro aloha hatreto ireo vahiny mivezivezy eto Madagasikara, tsy manana ahiahy amin’ny valaretina Covid-19.
Nivory maika teny Ambohitsorohitra ireo tompon’andraikitra maro, notarihin’ny filoha Rajoelina Andry sy ny Praiminsitra lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian ary natrehin’ny minisitry ny Fahasalamana sy ny Fitaterana. Teo koa ny solontena maharitry ny OMS eto Madagasikara. Manampy izany ireo manam-pahaizana eo amin’ny akademia siantifika.
Nanatontosa : Fanou